Uhlelo Lokwakha Izikweletu Zebhizinisi
Inhloso yohlelo lwethu lwesikweletu oluhlanganisiwe ukukhulisa ngokwemvelo iphrofayili yesikweletu usebenzisa inombolo yobunikazi beNtela kunenombolo yokuphepha yomnikazi. Lokhu kwehlukanisa isikweletu sakho somuntu siqu nekhredithi yebhizinisi labo. Ukuqamba isithombe sesikweletu sebhizinisi lakho kulondolozela imali nokwakha iphrofayili yesikweletu ezinkampani kungavimba inkampani yakho ukuthi ingabi “nesikweletu / ingozi enkulu” kanye nezigaba “zenzalo ephezulu”, ikonge imali.
Uhlelo lwethu lwebhizinisi lesikweletu luzothuthukisa ubunikazi bakho bezikweletu ngezinhlaka eziningi zokubika. Lokhu kuvumela ukwanda kwezikweletu eziningi njengoba ibhizinisi lakho likhula. Sibeka ibhizinisi lakho esikhundleni sokuqashiswa nezinye izinto ozidingayo. Konke lokhu kunciphisa / kuqeda isidingo sakho, mnikazi webhizinisi, sokukhulisa isikweletu sakho ukuze uqhube ibhizinisi lakho.
Uhlelo ngalunye lwezezikweletu oluhlanganisiwe luhlanganiswa ukuze ama-akhawunti webhizinisi akwazi ukusungulwa ngaphandle kwesiqinisekiso somuntu, lapho ungathola khona imali yokuqasha imoto, imigqa yesikweletu kanye / noma imalimboleko ngaphansi kwenombolo yakho ye-ID yeNhlangano.
Ikhredithi Eqinisekisiwe Yebhizinisi
Uhlelo lwethu lwesikweletu lufika ne Yokubuyiselwa imali ukuthi uma ulandela imiyalo yethu uye encwadini, ibhizinisi lakho lizothola isikweletu, noma imali yakho ibuyiswe. Amakhasimende ethu ngokuvamile angathola i- $ 50,000 kuya ku- $ 500,000 ngesikweletu sebhizinisi labo. Umsebenzi wethu ukukusiza ekwakheni amaphuzu esikweletu ukuze ukwazi ukukhuluma nababolekisi ukuthola imali mboleko. Asilona ibhange, ngakho-ke asinakukuqinisekisa noma yisiphi isamba semali. Shayela namuhla ubuze ngohlelo lwethu lokuqinisekisa isikweletu lwebhizinisi. Futhi, njengoba singesiwo ababolekisi asikuqinisekisi ukuthi amanani abolekisi azokuboleka wona, ngakho-ke izibalo ezikhona zenzelwe izibonelo kuphela.
Ukuxoxa nganoma yikuphi Uhlelo Lwezikweletu nochwepheshe, ngicela ushayele I-800.830.1055 Toll Free or I-661.253.3303 International I-Mon-Fri 7AM kuya 5PM Pacific Isikhathi.
Izinhlelo Zamanje Zezikweletu
Khetha kusuka kumazinga we-3 wesevisi, ngokuya ngezidingo zakho. Qala ngohlelo lwethu lwephrofayili yesikweletu lapho uzonikezwa wonke amathuluzi nosizo ngokwakha iphrofayili yesikweletu yebhizinisi lakho. Kumabhizinisi amasha, sinikeza uhlelo olufanayo ngokugcwaliswa okusheshayo kwenhlangano esifundazweni sakho. Uma umatasatasa futhi ungathanda ukuthi konke lokhu kuphathwe kuwe, sinweba insizakalo ephelele lapho abenzeli bethu bezolungiselela zonke izinhlelo zakho namafomu bese umane usayina futhi usithumele ku-imeyili, lapho-ke abeluleki bezikweletu bethu bezosebenza nebhizinisi lakho kanye nesizinda sethu semininingwane sezinkampani ezizimisele ukukunikeza isikweletu. Uhlu lwethu luqukethe amabhizinisi aqonda uhlelo lwethu lwesikweletu futhi afuna ukunika amakhasimende ethu isikweletu ngoba vele ayazi ukuthi utshala imali ngosizo lwekhredithi yebhizinisi lakho. Njengomholi ezinhlelweni zezikweletu ezincane zebhizinisi nezezimali, Izinkampani ezifakiwe zingakuvulela lokhu, ikhasimende lethu eligugu. Shayela futhi ukhulume nommeli okhokhelayo oyisikweletu namuhla.
Shayela namuhla uthole ukuthi ungaba kanjani nesikweletu sebhizinisi seqiniso futhi esihlukile ngezinyanga ze-4 kuya kwezinyanga ze-6. Abeluleki bethu bezikweletu bayatholakala iMon-Fri 7AM ku5PM, Isikhathi sePacific. Shayela iToll Free 1.800.830.1055 noma i-International e-1.661.253.3303.
Isinyathelo sokuqala ekwakheni isikweletu senkampani ngohlelo lwethu ukubheka ukuhambisana kwebhizinisi. Lokhu konke kuncike ekutheni hlobo luni lwebhizinisi olisebenzayo nokuthi likuphi. Lezi yi-Federal, State kanye nezidingo zokulandela zendawo. Ugcwalisa iphakethe lokwamukela, wenze imisebenzi eceliwe, futhi unikeze izinkomba njengoba kudingeka. Uhlu lokuhlola ukuhambisana nalo lungaba noma yikuphi ukusuka kumaphoyinti we-250 ukuya kuma-1,000, kwenze kube nzima ukunikezela noma yiluphi uhlu oluqondile kumakhasimende ethu kuwebhusayithi yethu. Ngakho-ke, sizoqhubeka uma sesithole isicelo sakho esigcwalisiwe.
Okwesibili, izimfuno izikhungo zezikweletu ezinazo zizokuhlolelwa. Olunye uhlu lokuhlola oluncike ezintweni ezimbalwa ezihlobene nebhizinisi lakho. Lokhu kwenzelwa okungenani ubunikazi bezikweletu be6, sicela ubheke uhlu olungezansi kwezinye izinhlaka esisebenzisana nazo.
I-D & B ™
Isipiliyoni sebhizinisi ™
Uma nje sesiphothule amasheke wakho wokulandela ukukhokhelwa kwezezikweletu kuhulumeni wakho, sesingaqala ukuklelisa ibhizinisi lakho nge-bureaus yesikweletu, esizoqala ukusungulwa kwephrofayili yakho entsha yesikweletu - ukwehlukanisa isikweletu sakho siqu nebhizinisi lakho. Ukufakwa ohlwini lwe-bureaus yesikweletu kungathatha iminyaka ethile yamabhizinisi futhi nalezo ebezinesikhathi eside zingahle zingafakwa kuhlu kunoma yiziphi izinhlaka ezinkulu zebhizinisi lesikweletu.
Lapho izinhlangano zezikweletu sezazi ukuthi ungubani, iphrofayili yakho yesikweletu ingakhiwa. Lokhu kuqala ngokuthola isikweletu. Abacebisi bethu basebenza nawe kanye nedatha yethu yezinkulungwane zezinkampani ezizimisele ukwengeza isikweletu ebhizinisini lakho. Ukusuka ekuqashisweni kwefenisha, amakhadi okuthenga ngesikweletu, imigqa yesikweletu nabathengisi kanye nabathengisi bezinkonzo abancane ababolekisa ngemali encane, ngokubambisana nomeluleki wakho UZOTHOLWA isikweletu kwezinye zalezi zinkampani, abese ezibika kuma-bureaus wesikweletu.
Kwezinye izinhlelo zethu zezinkampani ezikweletayo, uzosebenza nethimba labaqeqeshi bebhizinisi abazokusiza ukubeka imigomo efanelekile futhi bakunikeze izinto zomsebenzi okufanele uziqedele, futhi ulandele nawe ukuze uqinisekise inqubekela phambili. Ngalesi sikhathi, izitatimende zakho zezezimali zizobuyekezwa ukuze wonke amadokhumenti afanele alungele ukuvela lapho kufakwa isicelo sezikweletu nezinkampani eziningi.
Sinikeza uhlelo oluthuthukisiwe lwesikweletu sebhizinisi lapho cishe wonke umsebenzi wenzelwa khona. Umane usayine izicelo bese uthumela ama-imeyili kuzo. Konke amalungiselelo nezicelo ziqedelwe wena futhi siwenza wonke umsebenzi!
Isikhathi osenze ebhizinisini singenye yezinto zokuqala lapha. Kodwa-ke, singakha isikweletu sebhizinisi enkampanini esanda kusungulwa. Uma kufiswa isizini engaphezulu yebhizinisi sinohlu lwamabhizinisi ezindala amashalofu ongakhetha kuwo. Uma ngabe ungumnikazi okuwedwa weminyaka ye-3 futhi usanda kufakwa, noma ungafakiwe, uhlelo lokwakha isikweletu lungakusebenzela, noma kunjalo kunezinye izinzuzo ezingeziwe okufanele wazi mayelana nazo uma ungakafakwa, sicela ubuze abeluleki bethu ukuchaza lokhu. Iningi lamabhange lizocubungula noma liphike izinhlangano ezisanda kwakhiwa ngaphandle kwephrofayili yesikweletu yenkampani. Ngoba ukukalwa kulawulwa yi-ejensi yokubika isikweletu (ama-ies) hhayi thina thina, ngokwemvelo ngeke ngaso sonke isikhathi siqinisekise ukukalwa okuhle kwesikweletu. Senza ingxenye yethu kepha asiqinisekisi ukuhlaziywa kwe-credit bureau. Futhi asikuqinisekisi ukuthi inkampani endala izotolika inkampani yezikweletu ukuthi ibe nobudala obufanayo nosuku lokugcwaliswa. Kwesinye isikhathi i-credit bureau izobika iminyaka yenkampani njengosuku lobunikazi abasha, usuku lokubuyiselwa kosuku lokuvuselelwa. Ngoba isikhathi nezindleko zenzelwa ukwakha iphrofayili yesikweletu kungakhathalekile ukuthi i-credit bureau ihumusha kanjani ifayili, asikukhiphi ukubuyiselwa kwemali ngoba i-credit bureau ayizange ichaze imininingwane noma inikeze umbiko wokuthi ufisa. Lapho usebenza namabhange futhi ufuna imigqa emikhulu yesikweletu noma yemalimboleko, uhlelo lwebhizinisi luzodingeka, amabhange cishe ngaso sonke isikhathi adinga uhlelo lwebhizinisi lakho. Sinohlelo oluzokusiza ngalokhu uma isikhathi salo.
Iningi lamaklayenti ethu abika ngaphezulu kwesilinganiso sokugculiseka kwe-90% ngohlelo lwethu lwesikweletu lwebhizinisi. Izinyanga ze-4 kuya kwezingu-6 ngokujwayelekile kuthatha isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba amaphrofayili wesikweletu wezezimali aqoqiwe enziwe, noma kunjalo, ngosizo lwakho, sivame ukuqeda inqubo ku-2 kuya kumaviki e-4. Ungajabulela zonke izinzuzo zohlelo ngaso leso sikhathi.
Izinkampani Ezihlanganisiwe ngumholi ezinhlelweni zamabhange amancane nezinhlelo zezikweletu. Shayela ochwepheshe bethu namuhla at I-800.830.1055 Toll Free or I-661.253.3303 International.